Indlu enkulu yomthengisi we-Indigo ngaphezulu kweminyaka engama-220 ubudala / enamava onyaka wokuvuna imifuno kunye neziqhamo
Ishii-chō, Myōzai-gun, Tokushima-ken, Japan
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguShizuya
"Kaiwa no Sato" -KAIWA NO SATO-
Le ndlu yakudala yindlu ye-indigo eyakhiwe kunyaka wokuqala wenkcubeko (1804) ngexesha elizukileyo le "indigo".
Isakhiwo esiphambili kunye nebhedi (indawo yokulala elala i-indigo) idiliziwe ngenxa yokuguga, kodwa igumbi leendwendwe lembali kunye negadi ziye zagcinwa kwaye zisetyenziswa njengendawo yokulala yasefama ukuze ixesha ligcinwe lincinci.
"Ai", umthombo weTokyo Olympics Emblem Japan Blue, wakhulela kumhlaba ochumileyo kwindawo esezantsi yoMlambo iYoshino waza wazisa ubutyebi obukhulu kwisithili saseTokushima (Awa Clan).
Uyakwazi ukubona amaxwebhu amadala malunga ne-indigo, afana neepropati zenkcubeko. Nceda wonwabele umzuzu opholileyo we-nostalgic kunye nomtsalane weJapan Blue.
Unokukhetha ngokukhululekileyo kwaye utye iziqhamo kunye nemifuno yamaxesha amane enziwe kwintsimi ekufutshane.
* Ukusukela ehlotyeni ukuya ekwindla, wonwabele amakhiwane amaninzi njengoko uthanda.
Ehlotyeni: Ivatala, isitya esiluhlaza (iMelon)
Ekwindla: amakhiwane, iirharnati, ibhatata
Intwasahlobo: Iitapile, umbona, amahlumela e-bamboo, ibutterbur, ikonjac
Ehlotyeni: ijinja yaseJapan, iipepile, isitshalo seqanda, iitumato, ipepile, iikomkomere
Ekwindla: Iitapile, ikonjac
* Ukuvuna kuxhomekeke kwixesha lonyaka kunye nemozulu, ngoko ke nceda ubuze kwangaphambili ukuba uyafuna.
Nangona iyindlu yabantu bakudala ekupheleni kwexesha le-Edo, uya kuhlala kwigumbi leendwendwe eliphathwe ngononophelo lusapho lwakho kwizizukulwana ngezizukulwana.
Sukiya-style Shoin kwigumbi yabahambi ngexesha indigo, Yakusugi phezu Isilingi iikholam, lacquered imigangatho nolungiselelo, no-6 kunye amakhuko 8 tatami jade nail yokusithela. Ndiyathemba ungenza kunandipha emoyeni.
Nceda uqaphele ukuba amagumbi amabini ahlukaniswe kuphela ukuya kwi-fusuma kwaye awakho amagumbi ahlukeneyo, kwaye kukho i-air conditioner enye kuphela.
Ekubeni unokuhlala kuphela ngaphandle kokutya, nceda uzilungiselele ukutya kwakho ekhitshini okanye utye ngaphandle. Ukuhanjiswa nakho kuyenzeka.
Izibonelelo zeBarbecue nazo ziyafumaneka, ngoko nceda ucele kwangaphambili.
Ukulungiselela izithako zokuzityisa, sicebisa eyona venkile ikufuphi yokuthengisa ngokuthe ngqo yomfama, "Hyakka Ichi," kunye "neMyuziyam yeAwa Shoku," enemveliso yezolimo nezaselwandle kunye neemveliso eziqokelelweyo eziqokelelwe kulo lonke elaseTokushima Prefecture.
Kwabo bafuna ukomisa, sicebisa umenzi weNaruto Kintoki Shochu okufutshane.
Iimatrasi ezibekwa phantsi eziyi-2
4.93 ·Izimvo eziyi-104
4.93 out of 5 stars from 104 reviews
4.93 · Izimvo eziyi-104
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi104
・ Ihotele imi kwidolophu yase-Ishii kwimpuma yeSithili saseTokushima, malunga nemizuzu engama-30 ngemoto ukuya kumbindi weSixeko saseTokushima, kwaye ungonwabela i-Awa Odori.
・ Kukwakho neMyuziyam yoBugcisa yaseOtsuka edumileyo, kwaye kumalunga nemizuzu engama-40 ngemoto ukuya kwisiXeko saseNaruto, esidume ngeewhirlpools.
・ Indawo yentaba ・ imizuzu engama-20 ngemoto ukuya kwidolophu yaseKamiyama eSudachi.
・ Luhambo lwemizuzu engama-40 ukuya eMisato Village yeFireflies kunye ne-Ume kunye neWakimachi yesiXeko saseMima, ngoko ke inokusetyenziswa njengetheminali yokuhanjiswa.
・ Umgama ukusuka kwiNombolo yoku-1 ukuya kwiNombolo ye-18 yama-88 eShikoku iindawo zoHambo unokufikelelwa kuhambo losuku. Ukuba uhlala ubusuku obulandelelanayo, ndicinga ukuba ungayisebenzisa ngokufanelekileyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Shizuya
Sikwisakhiwo esikhulu esisecaleni, ngoko ke nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi nanini na.
Inombolo yomthetho: I-Hotels and Inns Business Act | 徳島県東部保健福祉局 | 徳島県指令東保第44122号
Iilwimi: English, 日本語